Badhaasa Dargaggoo hojii boonsaa hojjetaniif kenname – Awash Times
Badhaasa Dargaggoo hojii boonsaa hojjetaniif kenname
February 5, 2020 Malka Wabe Uncategorized Leave a comment
Dargaggoo Goobana Siida fi Lammaa Gammachuu bara 2013 hamma bara 2019 barreessitoota waajjira Tokkummaa Abbotii Gadaa Bishooftutti hundeeffammee yeroo turanitti, yeroo qabsoon Oromoo finiinaa ture sanitti Gadaa harca’e deebisanii ijaaruu keessatti Abbootii Gadaa waliin ta’uudhan gahee guddoo bahanii jiru.
Qeerrooleen kuni lameen fakkii sochii qeerroti kan nu jechisiisu, Irreechi yeroo iddoo qabsoof waadaa itti waliigalan yeroo ta’e sanitti Foollee ijaarudhaan qabsoon qeerroo akka hidda godhatuuf gahee guddaa bahaniiru. Qeerrooleen kuni lameen fakkii qeerrof qarree ta’uudhan Gadaa deebisanii ijaaruu cinaatti qeerroon akka wal ijaaru fi hamilee horatu gochuudhan irreecha qopheessurra darbanii Foollee ijaaraa turan.
Gadaa keenya yeroo UNESCOtti galmaahuf qabsoorra turamettis qeerroleen kuni gahee guddaa qabaachaa turan. Qeerolee kana jajjabeessun, hamilee qeerrolee hafaniif kenna kan jedhu yaadudhaan Gumiin Waaqeffannaa Norway Qeerroo Goobana Siidaa fi Lammaa Gammachuu badhaasa asii gadii kana kennuuf murteesse:
Badhaasni kanas biyyatti kan ergamuuf ta’a. Qeerrof Qarreelen hafanis hojiin isaan hojjetan kan yoomuu yaadatamu ta’uu akka asumaan yaadachiifna.
Gadaan Oromoo, hiddaf bu’ura tokkummaa Oromooti!
Gumii Waaqeffannaa Norway
Previous Post: Marii OMN obbo Leencoo Lataa waliin taasise
Next Post: Interview with election board (amharic) ከምርጫ ቦርድ ጋር ውይይት